Isihluzi seBhegi sabaQokeleli boThuli | China Ingxowa yeefilitha zoMqokeleli woThuli kunye nabaXhasi
I-valve ye-DMF-Z ye-electromagnetic pulse valve yi-valve ye-angle ye-angle efanelekileyo kunye ne-angle ye-90 degrees phakathi kwe-inlet kunye ne-outlet, efanelekileyo ukufakela kunye nokudibanisa kwebhegi yomoya kunye ne-tube yokuqokelela uthuli. Ukuhamba komoya kugudile kwaye kunokunika ucoceko lokucoca uthuthu lwe-pulse ngokwemfuno yeModeli No.
Inezibonelelo zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, umhlwa, uzinzo, ubukhulu obuncinci kunye nokuncipha, amandla aphezulu. Kwaye i-tapetum fiber ithwala ifayibha enye, i-three-dimensional micro-porous structure, i-porosity ephezulu kunye nokuchasana okuphantsi kokucoca igesi. Luhlobo lwesantya esiphakamileyo kunye nobuchule bokucoca ubushushu obuphezulu. Isetyenziswa ngokubanzi kubushushu obuphezulu bokuhluza igesi kwizikhuni zorhwebo ezinje ngemveliso yeekhemikhali, isinyithi kunye nentsimbi, ukunyibilikisa ...
Metas uthuli umqokeleli ingxowa iimeko eziqhelekileyo lobushushu igesi ulwelo, ingxowa uhlobo umqokeleli uthuli iimfuno uthuli lokucoca ibhegi ubushushu ngezantsi 150 ℃, kwaye kubushushu irhasi ithumbu izihlandlo aphezulu. Kuba olu uthuli luqulethe umsi kunye nothuli lwegesi alulungelanga ukuqokelelwa komqokeleli wombane wombane ngenxa yomda othile wokumelana, unokuqokelelwa kuphela ngeengxowa zelaphu okanye ngezinye iindlela; Ukuba kunyanzelekile ukunciphisa ubushushu obuqulathe uthuli lube ngaphantsi kwe-150 ℃, utyalo-mali luphezulu okanye luxhomekeke kuthintelo lwendawo leyo; Kuba igesi yothuli inezinto zesalfure, igesi yothuli ine-asidi "yombethe", inokuba ngaphezulu kuphela kwendawo yombethe we-asidi oko kukuthi, iqondo lobushushu liphezulu kwimeko yokuhluza kunye nokwahlula kunye nezinye izinto, ke kufuneka ube nohlobo Ukuchasana nobushushu obuphezulu befayibha yemichiza esetyenziselwa ukwenza izinto zokucoca ulwelo, imetas yentsimbi yeva ibhegi yokuhluza ilungele ezi zihlandlo.
Ifayibha yePolyimide, ekwabizwa ngokuba yi-P84 fiber, yifayibha enganyangekiyo ngobushushu enokumelana nobushushu obuphezulu. Ku-300 ℃ nge-100 h, inqanaba lokugcina amandla li-50%, ubude buncitshisiwe nge-5% ~ 10%, kwaye inqanaba lokuvezwa lingama-250 H, inqanaba lokugcina amandla le-45%, uzinzo oluhle kakhulu kwi-275 ℃, akukho kunyibilika , ubushushu beglasi obuyi-315 ℃, ikhupha kuphela igesi encinci eyingozi xa ibola. Ingabaleka ngokuqhubekayo kwi-260 ℃ kwaye ubushushu obusebenzayo kwangoko bunokufikelela kuma-280 ℃.
Ipholiyesta inaliti yaziva (isikhwama sokucoca uthuli sokucoca uthuli) senziwe ngetekhnoloji yokulungisa i-needling, oko kukuthi, ilaphu lesiseko lesiseko njengoko izinto eziphambili zisasazekile kumacala omabini omaleko wefayibha yoxinano olufanayo emva kokufaka amakhadi, emva koko ngenaliti inqaku langemva lokuhlaba, ifayibha yelaphu lesiseko liyinkimbinkimbi, kwaye yenziwa emva kokucula, ukuseta ubushushu, ukucoca kunye nezinye iinkqubo zokugqiba.
Inqanaba lokungena elinamanzi le-polyester ezimbini-ezithenwe zaziva ukuba ingxowa yeefilitha ifikelela kwinqanaba. Ikwaqinisekisa ukuba ipholiyesta enamacala amabini okucoca ifreyimu akukho lula ukuyivimba kwindalo enomswakama omkhulu, eyonyusa kakhulu ubomi benkonzo yesingxobo sokucoca kwaye inciphise ubunzima bokusebenza ngesandla. Ngelo xesha, umphezulu ipholiyesta ezimbini-prick inaliti-ubungqina waziva ibhegi lokucoca ulungile kwaye permeability umoya ilungile, eqinisekisa iimpawu umphezulu lokucoca ulwelo ...
Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Isamente Uqokeleli Uthuli, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Ingqokelela yothuli, I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Isihluzi seFelt Bag,